Alanzayar – Page 178
အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ရဲ့ ကိုင်တိုင်ရိုက် HD see more… (ကလေးများ မကြည့်ပါနဲ့…)0
အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ရဲ့ ကိုင်တိုင်ရိုက် HD see more… (ကလေးများ မကြည့်ပါနဲ့…) အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်… ခရက်ဒစ် ဗီဒီယို အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ရဲ့ ကိုင်တိုင်ရိုက် HD see more… (ကလေးများ မကြည့်ပါနဲ့…) အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်… ခရက်ဒစ် ဗီဒီယို အဆိုတော် သားဂန်းနဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ရဲ့ ကိုင်တိုင်ရိုက် …
တပ်က အရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ ကားထဲမှာ video ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့် (HD)
တပ်က အရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ ကားထဲမှာ video ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သံသာမိုးသိမ့် (HD) အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် သံသာမိုးသိမ့်တစ်ယောက် အခုလက်ရှိမှာ ဝရမ်.ထုတ်ထားခံရလို့ ထွက်ပြ.ေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။နွေဦးတော်လှန် ရေးမှာပါဝင်သော်လည်း ဝရမ်.ထုတ်ခံရပြီး နောက်မှာတော့ ဘာအသံမှထွက်မလာတော့ဘဲ တိတ်ဆိတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း သူ့ချစ်သူနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တစ်ခါ တင်တုန်းကတော့ သူမဟုတ်ကြောင်း …
ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် သွားလဲ တနေ့၂ကြိမ်တိုက်ပါရက်နဲ့ ခံတွင်းနံ့ နံနေရင် ဒီနည်းလေးလုပ်ကြည့်နော်.1
ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် သွားလဲ တနေ့၂ကြိမ်တိုက်ပါရက်နဲ့ ခံတွင်းနံ့ နံနေရင် ဒီနည်းလေးလုပ်ကြည့်နော် ကျမအသက် ၃၃ နှစ်အိမ်ထောင် ရှိပါတယ် ဆရာ။ အစာအိမ်ကတော့ အပူအစပ်စားရင် နည်းနည်းအောင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က အပူဓာတ်များလို့ အသားကအမြဲ ပူနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ်။ အဲ့တာကို ခံတွင်းနံ့နံလို့ပါ ဆရာ။ သွားလဲ တနေ့ ၂ကြိမ် တိုက်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတိုင်းလဲ ပလုတ်ကျင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ …
ခဏနေဖျက်ချခံရမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ ဒါမျိုးကကြည့်ရခဲတယ်……. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ခဏနေဖျက်ချခံရမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ ဒါမျိုးကကြည့်ရခဲတယ်……. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ခဏနေဖျက်ချခံရမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ ဒါမျိုးကကြည့်ရခဲတယ်……. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ခဏနေဖျက်ချခံရမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ ဒါမျိုးကကြည့်ရခဲတယ်……. အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ခဏနေဖျက်ချခံရမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ ဒါမျိုးကကြည့်ရခဲတယ်……. …
“ဈေးရောင်းတဲ့အခါ အောင်မြင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၁၇)ချက်”
“ဈေးရောင်းတဲ့အခါ အောင်မြင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၁၇)ချက်” တချို့ဈေးရောင်းရင် ဘာလို့အောင်မြင်တယ်ထင်လဲ.. ဗျူဟာရှိပါတယ်…ဒါတွေကသူတို့ရွေးချယ်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေပါ ၁ ။ ဆိုင်နေရာကောင်းခြင်းဟာ ဆိုင်ကြီးတာ ငယ်တာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ၂ ။ ရောင်းကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးဟာ ဆိုင်နေရာထက် ပိုအရေးကြီးနေတတ်ပြန်တယ် ။ ၃ ။ စကားချိုချိုသာသာ ဈေးရောင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောက်သည်ကို ပိုမြဲစေပါတယ် ။ ၄ …
မည်သည့်အပင်ကိုမဆို ရာသီချိန်မဟုတ်ချိန်မှာ အသီးသီးအောင်လုပ်နည်း
မည်သည့်အပင်ကိုမဆို ရာသီချိန်မဟုတ်ချိန်မှာ အသီးသီးအောင်လုပ်နည်း ကြက် ဥ ဟို မုန်း ဆေး ရည် လုပ် နည်း ကြက် ဥ အ ခွံ ရော အ သား ပါ ၁ ပိ သာ။ သ ကြား ၁ ပိ သာ။ နွား နို့ ၁ …
ကံကောင်းစေနိုင်သည့် အိပ်မက် နိမိတ်လေးများ
ကံကောင်းစေနိုင်သည့် အိပ်မက် နိမိတ်လေးများ အိမ်မက် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို အရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာ ဓက …
ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ…စတင်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့အချိန် သေချာဖတ်ထားကြပါ (၁) ဗူး… ကဆုန် မှ…နယုန်လအတွင်း။(၂) သခွား… တန်ခူး မှ…နယုန်လအတွင်း။(၃) ပဲတောင့်ရှည်… တန်ခူး မှ…ဝါခေါင်လအတွင်း။(၄) ခဝဲ… တန်ခူး မှ…နယုန်လအတွင်း။ (၅) ငြု တ်… ကဆုန်မှ…သီတင်းကျွတ်အတွင်း။(၆) ခရမ်းချဉ်သီး တော်သလင်းမှ…တန်ဆောင်မုန်းအတွင်း။ (၇) ချဉ်ပေါင် တန်ခူးမှ…ဝါဆိုလအတွင်း။ (၈) ရုံးပတီ ကဆုန်မှ…နယုန်လအတွင်း။(၉) ကော်ဖီထုပ်တော်သလင်းမှ…တန်ဆောင်မုန်းအတွင်း။(၁၀) ဆလပ်တော်သလင်းမှ…တပို့တွဲလအတွင်း။ …
ဝါထပ်ရခြင်းအကြောင်း ကမ္ဘာက နေကို လှည့်ပတ်ရာ၌ ၃၆၅ရက် ၆နာရီ ၁၂မိနစ် ၃၇စက္ကန့် ကြာ၏။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်နှစ် တစ်နှစ်ကို ၃၆၅ရကျထား၏။ ၆နာရီအစွန်းအတွက် ၄နှစ်တစ်ကြိမ်တစ်ရက်တိုး၏။ မြန်မာက ၂၉ရက်ကို၆လ ၃၀ရက်ကို ၆လထားသဖြင့် မြန်မာနှစ် တစ်နှစ်မှာ ၃၅၄ရက်သာ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်တစ်နှစ်ပြည့်ရနသို့မဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ပတ်ပြည့်ရန် မြန်မာနှစ် တစ်နှစ်မှာ ၁၁ရက်လို၏။ (မြန်မာက …
ဒီနေ့မကွေးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ စပါပြီ
ဒီနေ့မကွေးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ စပါပြီ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ဒီနေ့မကွေးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ စပါပြီ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ဒီနေ့မကွေးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ စပါပြီ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ဒီနေ့မကွေးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ စပါပြီ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ …
Previous 1 … 177 178 179 … 206 Next